Wasiir federaalka ah iyo wafdi la socda oo yimid Garowe – Puntland Post
Posted on July 14, 2019 July 14, 2019 by Liban Yusuf
Wadfiga oo lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Garowe
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Sadiiq Xirsi Warfaa iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta Puntland.
Wafdiga uu wasiirka hoggaaminayay ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirrada shaqada ee dowlad-gobolleedyada dalka, mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka socda hay’adaha dowlad-gobolleedyada dalka, waxaana garoonka diyaaradaha Gen. Maxamed Abshir ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyay wasiirka shaqada, dhallinyarada iyo cayaaraha Puntland iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Puntland.
Ujeeddada socdaalka uu ku soo gaaray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya magaalada Garoowe ayaa la xiriirta shir weyne socon doona muddo saddex cisho ah oo halkaa uu ka furayo wasiirka oo la xiriira horumarinta dhallinyarada iyo shaqo abuurka, waxaana uu shirkan qeyb ka yahay mashruuca ballaaran ee horumarinta dhallinyarada iyo shaqo abuurka ee loogu yeero shaqo siinta dhallinyarada ( Youth Employment Somalia ‘YES’).
Ugu horrayn, wasiirka wasaaradda shaqada, shaqaalaha , dhallinyarada iyo ciyaaraha Puntland, Jaamac Faarah Muuse ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsanyahay booqashada uu magaalada Garoowe ku soo gaaray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliya, Sadiiq Warfaa iyo wafdiga uu hoggaaminayo, wuxuuna sheegay muddada uu socda shirka horumarinta dhallinyarada iyo shaqaaleysiinta in looga dooddi doono waxyaabihii ka hirgalay mashruuca.
Wasiir Federaalka ah iyo wafdi la socda oo Garowe lagu soo dhaweeyay.
Posted by Puntland Post on Sunday, July 14, 2019